अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको अभाव, बिरामीलाई एम्बुलेन्समै उपचार ! - Sidha News
अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको अभाव, बिरामीलाई एम्बुलेन्समै उपचार !
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामी बढेपछि उपचारका लागि सिन्धुली अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको अभाव भएको छ । सीमित आइसोलेसन बेडले धान्न नसकेपछि बुधबारबाट रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासका बिरामीलाई एम्बुलेन्समै राखेर उपचार गरिएको छ ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लादकुमार पोखरेलका अनुसार अस्पतालमा प्रि–आइसोलेसन बेड सात वटा मात्र छन् । ती बेडहरू कोरोनाका शंकास्पद बिरामीले भरिएपछि एम्बुलेन्समा राखेर उपचार गर्नु परेको हो । ‘कोभिड–१९ को शंका लागेका बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गर्न प्रि–आइसोलेसन भनेर सात बेड छुट्याएका छौं, उनले भने, त्यस्ता बिरामीलाई प्रि–आइसोलेसनमा भर्ना गरी पीसीआर पोजिटिभ आए कोभिड १९ अस्पतालमा सारेर उपचार गर्दै आएका छौं ।’
रिपोर्ट नआएसम्म उपचारका लागि स्थान नहुँदा असहज भएको उनले दुखेसो गरे । अहिले प्रि–आइसोलेसन बेड भरिएकाले एउटा बेडमा दुई जना राख्ने गरिएको छ ।
एम्बुलेन्समा राखेर उपचार गरेका बिरामीलाई प्रि–आइसोलेसन बेड खाली भएपछि सारिने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । अहिले कोरोना शंकास्पद बिरामी दैनिक २० जनासम्म आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । ५१ बेड क्षमताको अस्पतालमा भवन निर्माणाधीन भएकाले अस्थायी रूपमा व्यवस्था गरी सञ्चालन गरिएको छ ।